မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: တီပီ မြန်မာ သင်္ကြန် ၂၀၀၉ (TPMyanmar Thingyan 2009)
တီပီ မြန်မာ သင်္ကြန် ၂၀၀၉ (TPMyanmar Thingyan 2009)
အစဉ်အလာ အမြဲကောင်းခဲ့တဲ့ တီပီမြန်မာသင်္ကြန်ဟာ ၂၀၀၉ခုနှစ် သင်္ကြန်ကိုလဲ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ.. အောက်က ဓာတ်ပုံတချို့ကတော့ တီပီမြန်မာ ၀က်ဆိုဒ်ကနေ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..
ငွေငန်းပျိုဖြူ သီချင်းအတွက် ပြင်ထားတဲ့ ငွေငန်းယဉ်
ကင်မရာနဲ့ အစားအသောက်တွေ မယူရ
သင်္ကြန်မိုးပြကွက်ကဲသို့.. ငွေငန်းပျိုဖြူများနှင့် ငွေငန်းယဉ်
တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေလဲ မပျောက်စေရန် တစ်နှစ်ကို တစ်မျိုး တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အကတွေကလဲ မရိုးနိုင်အောင်ပဲ ကြည့်ကောင်းလှပါတယ်..
မယ်သီတာနှင့် ဒဿဂီရီ ညီမများ.. (ပန်းဆက်ခန်း)
ဒဿဂီရိနှင့် မယ်သီတာ (ပန်းဆက်ခန်း)... (ဒဿဂီရိအကရဲ့ အံ့မခန်းဖွယ် ပညာကိုလဲ ပိုင်နိုင်စွာကပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျက်သည်းများပင်ထမိပါတယ်.. ၀မ်းလဲသာပါတယ်.. )
အပိုင်း (၂) တီပီမြန်မာ သင်္ကြန် မျှော်....
Posted by mabaydar at 1:17 PM
အဲဒီနေ့က ကောင်းကွက်တွေအကုန် မျက်လုံးထဲပြန်မြင်နေတုန်းပါပဲ သံချပ်တွေလဲ အမှတ်ရဆဲ
4/01/2009 9:36 PM
Can watch thingyan preview at www.tpmyanmar.org Now. Heard that thingyan CD will be out when the school open....
ဟောဗျာ ခုမှလာကြည့်မိတယ် နာတာပဲ။
နှုတ်ဆက်ပါတယ်.... (ပြန်လာမယ်. ပြန်ချစ်မယ်..)
ကိုရီးယား နှင့် ရှန်ဟိုင်း ဗီဇာ လျှောက်ခြင်း...
စီးတီးဟော စတိတ်ရှိုးနှင့် ၁၅ကျပ်သင်္ကြန်... ၂၀၀၉ ခုန...
၂၀၀၉ခုနှစ် စကာင်္ပူရောက် မြန်မာသင်္ကြန် (၁)
အချိုပွဲ အတွက် ၂ရက်ပဲ အချိန်ပေးပါ..
တီပီ မြန်မာ သင်္ကြန် ၂၀၀၉ ဒီဗွီဒီခွေ အမြည်း